‘चन्दा उठाएर अस्पताल भर्ना, मृत्युपछि नोबेलले शव दिएन’
मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार‘चन्दा उठाएर अस्पताल भर्ना, मृत्युपछि नोबेलले शव दिएन’
विराटनगर । विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालले उपचारका क्रममा मृत्यु भएका एक पुरुषको शव परिवारका सदस्य र आफन्तलाई दिन अस्वीकार गरेको छ ।
उपचारवापत लागेको पूरै खर्च नतिरेकोभन्दै अस्पतालले झापाको दमक नगरपालिका–८ का ४८ वर्षीय सुरज बुढाथोकीको शव दुई दिनदेखि नदिएको हो । उनको उपचारका क्रममा आइतबार बिहान ९ बजेतिर मृत्यु भएको जानकारी अस्पतालले परिवारलाई दिएको छ । बुढाथोकी सिटी सफारी चलाउँथे ।
आफूले चलाउने गरेको सफारी बिग्रिएपछि बनाउन ग्यारेजमा लैजाने क्रममा गत माघ २ गते उनी अचानक बेहोस भएर ढले । आफन्त र परिवारका सदस्यले तत्काल उपचारका लागि बुढाथोकीलाई दमकस्थित लाइफलाइन अस्पताल लगे । उपचार सम्भव नहुने अस्पतालले बताएपछि उनलाई त्यही दिन नोबेल अस्पताल ल्याइएको हो ।
अस्पतालले उच्च रक्तचापको समस्याले बेहोस् भएको बताउँदै बिरामीलाई तत्काल आइसियूमा राख्यो । त्यसपछि स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको भनेर भेन्टिलेटरमा पुर्‍याइयो । टाउकोमा रगत जमेर नसामा समस्या भएको हुनसक्ने बताउँदै चिकित्सकले भेन्टिलेटरमा राखेको पाँच दिनपछि शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिएको जेठी छोरी सुजना बुढाथोकीले बताइन् । त्यसपछि परिवारका सदस्यकै सहमतिमा शल्यक्रिया गरियो ।
भेन्टिलेटरमा राख्दै थप उपचार गराइरहेका बुढाथोकीको शल्यक्रिया गरेको १२ दिनपछि मृत्यु भएको हो । छोरी सुजनाका अनुसार शल्यक्रियापछि चिकित्सकले टाउकोमा रगत नजमेको र उच्च रक्तचापका कारण नसा खुम्चिएर समस्या भएको बताएका थिए । ‘नसा खुम्चिएका कारण ब्रेनको हड्डी नै निकाल्नु पर्‍यो भनेर चिकित्सकले हामीलाई जानकारी दिएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘तर शल्यक्रिया सफल भएको भनिए पनि अहिले उपचारकै क्रममा बुबाको निधन भयो ।’ उनका अनुसार अन्तिम समयमा अवस्था गम्भीर बनेर गएको भन्दै घाँटीबाट पाइप राखेरसमेत उपचार थालिएको थियो ।
पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण ऋण खोजेर, चन्दा सङ्कलन गरेर र छरछिमेकीबाट सहयोग जुटाएर ल्याएको रकमले बुबालाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको सुजनाको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रयोगशालामा भएका विभिन्न परीक्षण र उपचारवापत लागेकोमध्ये तीन लाख रुपैयाँ अस्पताललाई तिरिसकिएको छ । त्यसबाहेक अस्पतालले शल्यक्रिया चार्ज भनेर ७२ हजार रुपैयाँ छुट्टै लियो । औषधिवापत दुई लाख रुपैयाँ बुझाएको सुजनाको भनाइ छ ।
अस्पतालले परिवारका सदस्यलाई उपचारवापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएको उनले बताइन् । त्यही पैसा तिर्न नसक्दा अस्पतालले शव नदिएको उनको गुनासो छ । केही पनि सम्पत्ति नभएका सुकुम्बासी अवस्थाका बुढाथोकी परिवार अर्काको घरमा भाडामा बस्दै आएको थियो ।
बुढाथोकीले भाडाको सफारी चलाएर परिवार धान्दै आएका थिए । माइली छोरीको बिहे भइसकेको छ । अर्काकोमा बसेर भाडाको सफारी चलाउँदै गरिएको कमाईले परिवार धान्नुपर्ने अवस्थाका बुढाथोकीसँग दुई छोरी र श्रीमती आश्रित थिए ।
‘चन्दा सङ्कलन र सहयोग जुटाएर बुबालाई उपचारका लागि ल्याएका हामीले अहिलेसम्म उपचार र औषधिवापत पाँच लाख ७२ हजार रुपैयाँ तिरिसकेका छौँ,’ सुजनाले भनिन्, ‘बाँकी रहेको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्न नसक्दा हामीले दुई दिनदेखि बुबाको शव लगेर दाहसंस्कार गर्न पाएका छैनौँ ।’
उपचारका क्रममा कुनै छुट नपाइएको र अब बाँकी पैसा तिर्नसक्ने अवस्था नभएको जानकारी अस्पताललाई दिए पनि शवलाई बन्धक बनाएर राख्दा बुबाको अन्त्येष्टि गरेर मृत्यु संस्कारपछिको काम गर्न नपाइएको गुनासो सुजनाको छ ।
‘चन्दा उठाएर र ऋण खोजेर ल्याएको पैसा सकियो । अब बिलमा उल्लेख भएअनुसार उपचारवापतको बाँकी रकम तिर्नसक्ने अवस्था छैन,’ उनले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘उपचार गराउँदा हामी गरिबले अस्पतालबाट कुनै छुट पनि पाइएन । मृत्यु भएपछि जिम्मा नलगाइकन शव पनि बन्धक बनाएर राखिदियो ।’
सुजनाका अनुसार अस्पतालले उपचारवापत बाँकी रहेको पैसा तिर्नु, अनि शव लैजानु, नभए दिँदैनौं भनेर भनिरहेको छ । बुबाको मृत्यु भएपछि अब कसरी परिवार चलाउने भन्ने पीडा पनि थपिएको उनको गुनासो छ । ‘सफारी चलाएर बुवाले हामीलाई पाल्दै आउनुभएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बुबाको निधनको बज्रपातसँगै अब हामीलाई कसले आडभरोसा दिन्छ भन्ने अर्को चिन्ता पनि थपिएको छ ।’
उपचारवापत धेरै पैसा तिरिसकेको र बिरामीको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्थामा बाँकी रहेको थोरै रकम छुट गरेर शव आफूहरूलाई दिनुपर्ने माग परिवारका सदस्य तथा आफन्तको छ । ‘पैसा तिर्न नसक्दा शवलाई बन्धक बनाएर राख्नु ठीक होइन,’ सुरजका आफन्त कृष्ण खड्काले भने, ‘पैसा अभाव हुँदा गरिबले अस्पतालमा मृत्यु भएको शव पनि लैजान नपाउने अवस्था बन्यो ।’ उनले उपचार ठीक हुने बहानामा धेरै पैसा असुलिसकेको अस्पतालले अब थोरै रकम तिर्न बाँकी हुँदा पनि शव आफैँले राखेर पीडित परिवारसँग ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको गुनासो गरे । तिर्न बाँकीमध्ये केही रकम छुट दिन माग गर्दा प्रशासनका कर्मचारीले अस्पतालका सञ्चालक डा. सुनिल शर्मालाई देखाउने गरेको र शर्माले फोन नउठाउने तथा भेट नदिने गरेको खड्काले बताए ।
अस्पतालका प्रबन्धक नारायण दाहालले परिवारकै सहमतिमा उपचार थालिएका कारण बिरामीको मृत्यु भए पनि उपचारवापत लागेको रकम भने अस्पताललाई तिर्नुपर्ने बताए । ‘उपचारको पैसा तिर्न बाँकी रहे पनि मृतकका कोही आफन्त अस्पताल प्रशासनको सम्पर्कमा आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘हुन त सम्पर्कमा आए पनि डा. शर्माबाहेक अरुले छुट दिनसक्ने अवस्था छैन ।’ चिकित्सकलाई उदृत गर्दै दाहालले दिएको जानकारीअनुसार उच्च रक्तचापले समस्या बनाएपछि ल्याइएका बिरामीलाई उपचार गरेर बचाउन भने सकिएन ।